Home Somali News Somaliland: Xildhibaanno Taageeray Muddo Kordhinta Xukuumadda Iyo Golaha Wakiiladda
Xubno ka mid ay mudanayaasha Golaha Wakiilada ee Xisbiga tallada haya ee KULMIYE, ayaa shir jaraa’id oo ay maanta ku qabteen Magaalada Hargeysa waxay ku sheegeen inay soo dhaweynayaan go’aanka ay Guurtidu muddo xilkeed ugu kordhisay Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo.
Xildhibaan Saleebaan Cawad Cali (Bukhaari) ayaa sheegay inay muddo kordhnta Golaha Guurtuda soo dhaweynayaan “Waxanu soo dhaweynaynaa Mmwqifka iyo go’aanka geesinimada leh ee Golaha Guurtidu ay maanta sameeyeen muddo-kordhin dalka iyo Ummadduba. Bulshada caalamka Somaliland 24 sanno ayaa xorriyadoodii ka oo wareegtay aanaan ka helin Ictiraaf iyo waxqabad aanay noqonin qaar wax noo yeedhiya oo doorasho aan xiligeeda, Xerarkeedii iyo qorshayaasheedii aan la diyaarin ay sanka nagaga tolaan, waxana aanu u aragnaa inaanay taageerayaal ahayn ee ay faro-geliyaan yihiin oo doonayaan inay arrimihii guddaha iyo go’aanadii uu qaadan lahaa Golaha Guurtidu soo farogeliyaaan.” Ayuu yidhi Xildhibaan Bukhaari
Xildhibaan Ibraahim Caraalle Ruush ayaa isna taageeray go’aankaasi Guurtida, waxaanu yidhi “Guddiga doorashooyinka qaranku waxay xaq u leeyihiin inay muddo qabtaan xilliga ay haystaan xili sharci ah oo ay muddo ku dhex qabtaan, marka aanay haysana cidda wakhtiga kordhinaysa ee wwoodda lihi waa Golaha Guurtida. Waxana uu kordhiyey muddadii ay isla qaateen Xisbiyad qaranka oo ay ku ku dareen 4 bilood.”